ငါးမွေးကန်များနှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေး - အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကြံပြုချက်များ
ပုံစံမျိုးစုံ၏ကြီးမားသောရွေးချယ်ရေးနှငျ့ရငျဆိုငျရုံငါးမွေးကန်ကိုစတငျဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသူများသည်, အရွယ်အစားနှင့်ငါးမွေးကန်များတွင်ဇီဝချိန်ခွင်လျှာကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ Device ရဲ့ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံနှင့်အတူ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များအပေါ်အခြေခံပြီး, သင်လိုအပ်အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရွေးချယ်ပါ။ တဦးတည်းကိုသာလိုအပ်သောအခြေအနေများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အများကြီးပိုခက်များမှာအလွန်သေးငယ်တဲ့ငါးပြတိုက်, သူတို့သည်အလျင်အမြန်ရေအပူချိန်ခုန်တတ်နိုင်ဆိုးရွားကြောင်းစဉ်းစားရန်ရှိပါသည်။ ငါးပြတိုက်အလတ်စားသို့မဟုတ်ကြီးမားသောအရွယ်အစားရွေးချယ်ဖို့ သာ. ကောင်း၏။ မြေဆီလွှာ, ရေစစ်ထုတ်, တစ်ဦးသာမိုမီတာ, အောက်စီဂျင်နှင့်အတူရေတပုဒ်ကိုများအတွက်တွန်း, ငါးအဘို့ကြော့ကှငျး, illumination နှင့်အိပ်ထဲသို့ထည့်နေကြသည်များအတွက်ငါးမွေးကန်ဆီမီးခွက်: အများ၏ငါးမွေးကန်အစီအစဉ်ရဲ့ start များအတွက်လိုအပ်သောနိမ့်ဆုံးပစ္စည်းကိရိယာများ။ အပင်ငါးမွေးကန်၌ထားကြ၏, အတု (ငါးကိုစတင်ရန်စီစဉ်ထားလျှင်များသောအားဖြင့်ဤသူဝယ်ယူနေကြတယ်, အသက်ရှင်သောပင်လယ်ရေညှိလောင်နိုင်ပါတယ်) နှင့်အသက်ရှင်လျှက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ရေတိုင်ကီနောက်ထပ်တစ်ဦးကွန်တိန်နာထဲမှာအားမရမတိုင်မီစင်ကြယ်စေရပါမည်။ အဆိုပါတင့်ကားပြီးသားသိမ်းပိုက်သောအခါ, သငျသညျအခြိနျမှနျမှရေကိုသာတစိတ်တပိုင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့ဂေဟစနစ်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ရမည်ဖြစ်သည်။
သင်စောင့်ရှောက်ဖို့စီစဉ်ထားငါးအဘယ်သို့မျိုးစိတ်ပေါ်မူတည်ပြီးငါးမွေးကန်ကိုစတငျဖို့ဆုံးဖြတ်ကြသူအရင်ကဆိုရင်အဘို့ကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ။ တစ်ခုချင်းစီမျိုးစိတ်ရေများအတွက်တိကျသောလိုအပ်ချက်များ၎င်း၏အပူချိန်, အစားအစာ, အခြားငါးငါးမွေးကန်များ၏နယ်မြေများ၏လူဦးရေရှိတယ်။ ဒါဟာသဘာဝအလားတူအခြေအနေများတွင်နေထိုင်သောသူတို့မျိုးစိတ်ကိုရွေးဖို့လိုအပ်ပေသည်။ အရင်ကဆိုရင်ထိုသို့သဘာဝရန်လိုခြင်းနှင့်ရောဂါများကိုခံနိုင်ရည်အဖြစ်ရေကိုငါးမျိုးစိတ်များ၏ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အတက်အကျရဖို့မဟုတ် သာ. ကောင်း၏။ အသုံးအများဆုံးလွယ်ကူ-to-စောင့်ရှောက်မှုများမှာ cichlids , guppies, platypus, veiltail, ငါးခူအမျိုးမျိုး။ ဒါဟာအလွန်များပြားမှုသည်ငါးမွေးကန်ရဲ့ဒါကြောင့်အဘယျသို့, ငါး၏အတွေ့အကြုံမရှိသေးသောမြိုးဆကျမကြောက်သင့်ပါတယ်။ သငျသညျတတ်နိုင်သမျှအများအပြားလှပကွဲပြားခြားနားသောငါးကိုဝယ်ချင်ပေမယ့်ကျဉ်းကျုတ်အခြေအနေများအတွက်, သူတို့ကနေမကောင်း get နှင့်ပင်အသေခံရန်စတင်ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်နို့တိုက်ကျွေးဖို့အာရုံစိုက်။ ဤကိစ်စတှငျ overfeeding ထက်ပိုကောင်းတဲ့ underfeeding ။ ငါးအစားအစာနှင့်နှစ်ရက်မပါဘဲငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်နိုင်ပေမယ့် uneaten စာကျွေး၏စည်းစိမ်လျင်မြန်စွာရေ turbidity နှင့်ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားစေပါတယ်။
ဘာ castrated ကြောင်အစာကျွေးသလော
အဆိုပါနှီးဖို့ Spitz သင်ပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Molly - အကြောင်းအရာ
ဟမ်းစတား - အိမ်တွင်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု, အရေးကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံ
ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် copious အဖြူဆင်း
သင့်ရဲ့အားလပ်ချိန်များတွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု9applications များ
Boyarka - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ, contraindications
မိခင် nursing မှိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသလော
Agaric ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ၌ပျားရည်ကနေ Caviar
ဆီးချိုရောဂါ - လက္ခဏာများ